नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी « रिपोर्टर्स नेपाल
Tag: नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी
मन्त्री परिवर्तन गर्न नेता पौडेलको माग
बुटवल, ४ साउन । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी समिति सदस्य देवेन्द्र पौडेलले ओली र प्रचण्डबीच आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्नेलगायतका ५ बुँदे
प्रचण्डको निशानामा मन्त्री गोकुल बास्कोटा !
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले मन्त्रिमण्डल पूनगर्ठनबारे लगातार आवाज उठाउँदै आएका छन् । तर, अध्यक्ष दाहालले आज सरकारका प्रवक्ता सञ्चार
प्रचण्डका शक्तिशाली घरबेटी अन्तत: यसरी परे फन्दामा
काठमाडौं, २१ असार । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका दोस्रो तहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का घरबेटी शारदा अधिकारीको कन्ट्रक्सन कम्पनीलाई कारबाहीको तयारी भएको छ । भक्तपुर जिल्लाको नगरकोट जाने सडक
‘अयोग्यता’ को बिल्ला हटेपछि ‘माननीयज्यू’ दंग
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलकी सचेतक शान्ता चौधरीले जीवनमा धेरै दुःख पनि पाइन् र धेरै असन्तुष्टिको अनुभव गर्ने गरी राजनीतिक पदमा पनि पुग्नुभयो तर उनलाई सधैं एउटा पिरलोले सताइरहन्थ्यो–
काठमाडौं, १३ जेठ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारले अघि बढाएको मिडिया काउन्सिल विधेयकको पक्षमा उभिएका छन् । अध्यक्ष दाहालले उक्त
‘बन्दुकको त्रास नदेखाउन विप्लवलाई माधव नेपालको चेतावनी’
दाङ, ६ जेठ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले बन्दुकको त्रास नदेखाउन नेत्रविक्रम चन्द विप्लवलाई चेतावनी दिएका छन् । दाङको घोराहीमा सोमबार आयोजित
प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध फेरि खनिए माधव नेपाल, विद्येयक ल्याउँदा छलफल नगरेको गम्भिर आरोप
दाङ, ६ जेठ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध कडा अभिव्यक्ति दिएका छन् । उनले मिडिया काउन्सिल विधेयक पार्टीमा
समृद्धि हाँसिल गर्न सहमति, सहकार्य र एकता अनिवार्य : जुली महतो
जुली महतो, प्रतिनिधिसभा सदस्य, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) :प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अघि सार्नुभएको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारालाई सार्थक तुल्याउने दिशामा सरकार अघि बढिरहेको छ । सरकारको एक
नेकपा सचिवालय बैठक सम्पन्न : नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबारे छलफल
काठमाडौं, १६ बैशाख । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रलाई मध्यनजर गरेर नीति तथा कार्यक्रम बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको नेकपा
काठमाडौं, ९ बैशाख । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकम दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एक वर्ष्भित्र पार्टीको महाधिवेशन गर्ने बताएका छन् । पार्टी स्थापना दिवसको अवसरमा
सांसद नविना लामा अस्पताल भर्ना, के भएको हो ?
काठमाडौं, ५ चैत्र । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नेतृ एवम प्रतिनिधिसभा सदस्य नवीना लामा अस्पताल भर्ना भएकी छन्। छाती दुखाइको समस्या देखिएपछि उनलाई थापाथलीस्थित नर्भिक अस्पतालमा भर्ना गरिएको
नेकपा कार्यदलको बैठक बस्दै, बुझाउला त प्रतिवेदन ? (भिडियोसहित)
काठमाडौं, ७ माघ । सांगठनिक एकता टुंगो लगाउन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) स्थायी कमिटीले गठन गरेको कार्यदलको बैठक आज बस्दैछ । यसअघि कार्यदलले समयसीमाभित्र आफूलाई दिएको काम सम्पन्न गर्न असफल